HomeArimaha QoyskaTalo Kaa Caawinaysa In Uuna Si Deg-deg Ah Jacayl Kuugu Dhicin
Jacaylka ayaa ah dareen ay ku kala qaybsanyihiin dadku, dadka qaar ayaa u arka dareen ay u baahanyihiin Bani Aadamku iyada oo ay lagama maarmaan u tahay in uu qofku helo ama soo maro, dadka qaar ayaan aaminsanayn jiristiisaba iyaga oo u arka diciifnimo iyo waliba madadaal halka ay qaar kale u arkaan dareen sun ah oo ay wax walba u sameeyaan sidii ay uga fogaan lahaayeen sidii ay wax u jeclaan lahaayeen..
Hadaba Nooc walba oo aad tahay waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa talooyin aad isaga ilaalin karto ama uga hor tagi karto sidii uuna kuugu dhicin jacayl deg-deg ah.
1.Buuxinta Wakhtigaaga fasaxa ah:
Inta badan sababta jacaylka deg-dega ah ugu dhoco dadka ayaa ah wakhtiga banaan ee ay helaan iyaga oo isku daya in ay buuxiyaan wakhtigaas iyaga oo adeegsanaya jacayl si ay wakhtiga isku dhaafiyaan.
Sidoo kale qofka ayaa isku dayaya in uu wakhtigiisa fasaxa ku qaato arin khaas ah isaga oo halkaaska soo galay dareenka jacaylka oo dhan walba leh.
2.Ka Cashar Qaadashada Wixii Hore Ee Ku Soo Maray:
Hadii uu horay jacayl kuu soo maray waa tusaale fiican oo aad uga baran karto cashar fiican in aanad si deg-deg ah qof kale u jeclaan ama aanad ku dhicin khaladkii markii hore sababtana u noqotay fashilkii xidhiidhkaaga.
3.Doorashada Jacaylka Riyadaada:
Aqoonsiga iyo ogaanta tayada qofka aad doonayso in aad jacayl la samayso ayaa kaa caawin kara in aanad si deg-deg ah jacayl ugu qaban qof walba maadama aanad qof walba ka helayn tayada aad raadinayso waxana ay sabab u noqon doontaa in aanad si deg-deg ah u jeclaan qofka aad is barataan wiil/Gabadh.
Ka helista ayaan ahayn jacayl ama in aad qof jeclaatay waxa fiican in aad samayso tijaabin dareenkaaga ah adiga oo qiimayn doona sifooyinka fiican iyo kuwa xun ee qofka aad doonayso in aad jacayl la wadaagto.